ILondon ukuya eAmsterdam Ngu-Eurostar Uloliwe Ukusuka kwi- € 40 | Gcina A Isitimela
ekhaya > Train Travel Holland > ILondon ukuya eAmsterdam Ngu-Eurostar Uloliwe Ukusuka kwi- € 40
Enye yezona ndlela yaziwa kakhulu ukuhamba eYurophu ukusuka eLondon ukuya Amsterdam, uhambo ekhawulezayo abangaphezu 4 million abakhweli ukwenza uhambo kunyaka ngamnye. Inketho ephezulu yezothutho nguloliwe odlula kwi-Eurostar, i-high speed kaloliwe odibanisa iingqukuva ezimbini European. le ndlela, owavula ku 2018, uhlala omuhle ukuba abo babelinde ukuba wonge imali aze axhamle lula ukuba yokuhamba kaloliwe inikeza.
Ezantsi, Ungafumana zonke iinkcukacha oza kuzifuna ukukunceda ulawule iLondon yakho ukuya eAmsterdam Eurostar.
Eli nqaku ibhalelwe ukuze kufundiswe abathengi malunga uhambo ngololiwe kwaye wenziwa ngu Gcina A Isitimela, Amatikiti eeTrayiti abiza ixabiso eliphantsi Emhlabeni.
Eurostar Train Times Ukusuka London To Amsterdam
I Eurostar ubaleka ngokufuthi, nge ku 16 Utyeshelo ngosuku kuxhomekeke neeholide ngeempelaveki. Uloliwe wokuqala osuka eLondon uye eAmsterdam ngalo naluphi na usuku usuka eLondon St. Pancras e 07:16 kwaye uthatha elipheleleyo 3 iiyure kwaye 55 imizuzu, ukufika kwi Amsterdam Central kwi 12:11 (Amsterdam Centraal ligama Dutch ku Amsterdam Central Station). Oku kudla enye amatikiti ingenandleko ebifumaneka, ngoko ukuba sele zazidlala ndibathuma ndivuka kusasa uyakwazi ukugcina imali kunye nentloko phaya qheke ukusa.
amaxesha yendlela iyure phantse nanini, uyaphuma nawe inala ongakhetha kuzo ixesha lokuhamba. Uloliwe wokugqibela wobusuku ihamba ngo- 17:16 wafika 22:11, leyo nje ixesha elaneleyo bonwabele okulula kade-busuku ikomkhulu Dutch. Khangela kwisayithi yethu apho unako ukufumana iqhosha ilungelo lomkhusane okanye nqakraza nje SaveATrain.com, yeLondon epheleleyo ukuya eAmsterdam Eurostar yamaxesha okubhala.
ILondon ukuya eBrussels amaxabiso oLoliwe
ILondon ukuya eParis amaxabiso kaloliwe
IGeneva ukuya eLondon ngamaxabiso kaloliwe
ILondon ukuya eAmsterdam amaxabiso kaloliwe
Nokufumana indawo itikiti lakho On The Eurostar
Onke amatikiti ololiwe e-Eurostar abandakanya ubuncinci iziqwenga ezimbini imithwalo kunye bag ngesandla. Ukuba babehamba bekuthi imithwalo, unako kwakhona ukhetha i itikiti ekuvumela ukuba ezinye izinto. Nangona moya mali lungayitya imali ngaphantsi zokubhukisha zabo kokuqala, iimali bag kunye neentlawulo ngokhetho isihlalo ngokukhawuleza dibanisa i, nto leyo ethetha ukuba ekugqibeleni ngokuhlawula ngakumbi ezininzi kangako.
Amaxabiso etikiti lale London ukuya eAmsterdam Eurostar kuhambo kutshintsha kakhulu, ngoko sincoma bathenga amatikiti msinyane nje ukuba ukwazi. Ukuthetha jikelele, la matikiti ukuya athotyiweyo iinyanga ezintathu kwangaphambili, nangona amaxesha uyakwazi bona bafumane ukuya kwiinyanga ezintandathu phambi komhla yakho yokuhamba. Sincoma usebenzisa zethu Gcina A Train amatikiti etreyini ehlabathini website ukufumana ukubhukisha amatikiti etreyini yakho, leyo uyazingxoka ngokuzenzekelayo lonke uluhlu ekhoyo ukuze ngexabiso ixabiso kunokwenzeka, aqinisekisiwe.
IRotterdam ukuya eLondon ngamaxabiso oLoliwe
I-Paris ukuya eLondon amaxabiso kaloliwe
IBrussels ukuya eLondon ngamaxabiso oLoliwe
Amaxabiso kunye Iindidi zeetikiti eLondon ukuya eAmsterdam Ngu-Eurostar Train
Uloliwe Eurostar isebenza ezingontsini iklasi ezintathu-ngokuxhomekeke mali yakho. Kwabo bafuna nje ukuba ukusuka kwindawo enye ukuya kwenye, amatikiti udidi lwesibini ngcono. Abo ekuhambeni Ishishini endaweni zithande itikiti Standard iNkulumbuso okanye Business Premier, nobabini ezivumela ukuba uhlale e Abaqeqeshi yokuqala-class nokubonelela isidlo kuhambo lwakho.
Njengokuba kukhankanyiwe ngaphambili, amaxabiso olutshintsha-tshintsha ngayo imihla yakho zokuhamba, ke uzakufuna ukubhukisha itikiti lakho kaloliwe nje nje nje kuvulekileyo ukubakho. Ukuba incwadi ngokwaneleyo kwangaphambili, uya zingafuna ukuba ahlawule ngawo 92 dollar lokuya nobuya, okanye 46 dollar indlela enye. Ukulinda de kube ngumzuzu wokugqibela ingaphinda iyiqhube amaxabiso isibhakabhaka-aphezulu, kunye neendleko phantse kabini i kamva uthenga itikiti lakho.
Khumbula ukuba ukususela ngoMeyi phambili, uloliwe ngqo Amsterdam Central Station ku London St. Pancras ziya kuqala ukusebenza, leyo kuya kongela wena iiyure eziliqela kwexesha lokuhamba endleleni yakho imbuyekezo. Kwakhona eqala iinkonzo ngqo Rotterdam. Ezi nkonzo ziya kuba kwakhona zitshiphu amaxabiso yangoku.
kulungile ukuba ukuphawula ukuba Eurostar ayifumaneki kwabo ukubamba lokuphumelela kaloliwe a, ngoko ukuba ufuna ukwenza olu hambo i egudileyo nezifikelelekayo, uthenge itikiti lakho uloliwe in advance. Ungafumana amatikiti oololiwe online kwi website ezahlukeneyo, nangona ezo webhusayithi zibonisa amaxabiso anyukayo amatikiti esitimela ase-Eurostar xa kuthelekiswa Gcina A website Qeqesha.
Kanye capital, uxhume phambili nge eziliqela oololiwe Amsterdam ezahlukeneyo. iinkonzo kaloliwe-High speed nawo wacela ukuya kwinani leendawo kulo lonke izwekazi.
I-Bremen ukuya eAmsterdam amaxabiso kaloliwe
IHannover ukuya eAmsterdam amaxabiso kaloliwe
Bielefeld ukuya eAmsterdam amaxabiso eTreyini
IHamburg ukuya eAmsterdam amaxabiso kaloliwe
Ukukhwela uloliwe we-Eurostar ukusuka eLondon ukuya eAmsterdamn
kanye eyayifakwe, lilonke ixesha lokuhamba ukusuka eLondon ukuya eAmsterdam ngololiwe limalunga 3 iiyure kwaye 52 imizuzu. Unalo yakho ukufika pre-lokuhamba, ixesha uhambo lwakho lilonke iza kuba phakathi 4.5 iiyure.
Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, kukho free WiFi eyayifakwe, ukuze uhlale up nayo yonke email yakho kunye neemfuno kwimidiya yomphakathi. Kuxhomekeka itikiti lakho, unako kwakhona o ukuba umqeqeshi lokutyela, apho unako ukutya ukufumana, iziselo kunye namaqebengwana. Ukuba uhleli ekharejini lokuqala-class, ukutya ziya kusiwa ngqo isihlalo sakho.
phezu befika, akukho mfuneko yokuba uye ngokusebenzisa ulawulo yokundwendwela, nangona emva Brexit kunye nokususwa kwe-UK ukusuka EU ezi nkonzo zingatshintsha. Qiniseka ukukhangela imithetho yendawo phambi kokuba siqalise uhambo lwakho.
ILondon ukuya eAntwerp amaxabiso oLoliwe
ILondon ukuya eLille amaxabiso kaloliwe
IStrasbourg ukuya eLondon amaxabiso oLoliwe
ILondon ukuya eRotterdam amaxabiso kaloliwe
Kanjalo, umbuzo ngulo kutheni kanye Europe kungcono abanamava nge umdla uloliwe – emveni kwakho konke, eli lizwekazi kakuhle ezidityanisiweyo kulula traversable ngu moya, imoto, okanye ibhasi. kunjalo, bambalwa izinto unothando njengoko ubuhle asendle ngaphandle window yakho kwi ukukhwela uloliwe, yaye abahambi-okokuqala akukho phantse akukho lula ngaphezu tsiba okhwele uloliwe nje phambi kokuba Isuka. Oku kuchasene obukhulu moya eYurophu, apho ujonge-in phambili ixesha elingaphaya kweeyure ezimbini kwaye uchitha ixesha elongezelelweyo kunye nemali abakhweli kwindawo kwisikhululo.
Ethetha kwexesha lokuhamba, Europe Yaziwa iziporo yayo-high speed, kakhulu kuphuca motorways ziphithizelayo. Loliwe kulo lonke izwekazi kuphekeka ngokufuthi ngqo, leyo ethetha ngaphantsi kwexesha emsebenzini kunye nexesha ngaphezulu ekubhekeni.
Izikhululo Isitimela babe inzuzo yokuba-ibekwe kakuhle njengoko zidla eyakhelwe ngaphakathi kwesixeko. Ludla zinika ixesha lokuhamba ezininzi ngemini amawaka lweendlela, oludinga uya njalo ukhetho ukuhamba.
IFrankfurt ukuya eLondon ngamaxabiso kaloliwe
IMunich ukuya eLondon amaxabiso oLoliwe
IiMoutiers ukuya eLondon ngamaxabiso oLoliwe
I Marseilles ukuya eLondon amaxabiso oLoliwe
Amatikiti encwadi ane Gcina isitimela eLondon yakho ukuya eAmsterdam ngoLoliwe
Khangela isayithi yethu amatikiti incwadi yonke zokufikela eYurophu best, okubalwa Bheljiyam, ElamaTaliyane, Swizalend kwaye i UK (kubandakanya uloliwe osuka eLondon uye eAmsterdam une-Eurostar). enjini yokukhangela yethu yenzelwe ukuba Gcina imali kuzo zonke amatikiti kwaye ziquka akukho ntlawulo nokubhukisha. Senza kube lula kuwe ukuba uthenge ngokwamkela iindlela ezininzi lomvuzo, kubandakanya ikhadi lamatyala, Giropay, nabangakwazi ezininzi.
ke, nasiphi na isizathu yakho ukuhamba, nokuba wena uhamba wedwa okanye nabanye, thatha imizuzu embalwa ukukhangela amatikiti oLoliwe kugcino loLoliwe, esinikeza i amaxabiso asezantsi, aqinisekisiwe.
Ufuna incwadi? Thatha 3 imizuzu ukufumana itikiti eLondon wakho Amsterdam train ukukhwela www.saveatrain.com . Bhala umhla kunye nexesha onokuthanda ukuba ukuhamba, kwaye siza kukunika ixabiso kakhulu uhambo lwakho.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho? Cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flondon-amsterdam-direct-train%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)